Madaxwayne Hassan Sheikh Mohamoud Iyo Xakuumadiisa: ‘Oo Aan Weli Hargaysa Cag Dhigi Karin’ | http://kismaayodaily.com
Waxaan maqalnay in uu jiro madawaynaha aduunka ugu faqiirsan, waana madaxwayne Jose Mujica (Hose Muhica), ee wadanka Urugway – oo ka mida wadamada loo yaqaan ‘South America’. Aqristow waa cajaa’ibe, waxaase jira madaxwayne kale oo aad taqaano, kaas oo ka taliya magaalooyin kooban. Isla markaana madaxwaynahaas iyo dowladiisuba aan marna loo ogolayn in ay cag dhigaan caasimada labaad ee wadankiisa. Meel dheer ha u raadin, waa nin aad taqaan magaciisa, wadanka uu u dhashay iyo xisbiga uu siyaasada la wadaago.
Marka hore, sida shabakadaha wararka Soomaalida ee sida gaarka loo leeyahay ku waramayaan, ayaa waxay tabiyeen in “UN-ku ka welwel qabo in ay Soomaaliya ay marto jidka xun” Waxay ila tahay, hadii aad tahay jiilka aan isku faca nahay, natiijada jidka xun laga dhaxli karo ay tahay mid la saadaalin karo. Xukuumada hada jirta waxay la diidan tahay dastuurka ilaa hada uma cadayn dadwaynaha Soomaliyeed, laakiin waxaa marag madoonto dhismaha aqalkii odayaasha uusan taaba gelin. Dhinaca kalena, Dowlad Goboleedyada diyaarka u ah in ay dhismaan sida dastuurka cusub uu qabo, aan weli dhamaystirin.
Marka warka dulucdiisa aan usoo noqdee, madaxwaynaha Soomaaliya waxaa uu tagay magaalo madaxda Dowlad Goboleedka Puntland, ee Garoowe, taas oo si wayn loogu soo dhaweeyey. Sidoo kale, waxaa uu tagay magalada madaxda Dowlad Goboleedka/Maamulka Jubbaland, ee Kismaayo, waxaana loo soo dhaweeyey sidii Garoowe si la mida. Ugu danbayn, waxaa uu booqasho ku tegay magaalo madaxda Dowlada Goboleedka lagu rajo qabo in la sameeyo, ee KoonfurGalabeed (Bay, Bakool iyo Shabeelada Hoose), ee Baydhabo, iyada oo sida Kismaayo iyo Garoowe si la mida loogu soo dhaweeyey. Weli madaxwaynaha kama hadlin dadkii soo dhaweeyey iyo kuwa ooda ka rogtey, ee diidey in uu iridka uga soo galo.
Waxaase dadku ogayn in madaxwaynaha Soomaaliya iyo Xukuumadiisu ay haboon tahay in wax laga weydiiyo waxa aysan marnaba uga rajo qabin in ay isku mashquuliyaan booqashada ama laga casumo magaalo madaxda labaad ee dalkeena Soomaaliya, Hargaisa. Waxaanse naga qarsoonayn in Dowlada/Maamulka Somaliland si cad u sheegeen in aysan marna u ogolaanayn in qof ka socda Dowlada Soomaaliya uu cag soo dhigo Somaliland, taas oo ay ka doodi karaan. Marka, hadii madaxwaynaha Soomaaliya uusan tegin karin qayb ka mida wadankiisa, yuu madaxwayne u yahay? Hadiise kuwii soo dhaweeyey uusan wanaagooda arkayn, ma soo dhawayn doonaan markale? Mida kale, doorashada 2016, waan qofkuu ALLAH gaarsiiyo, ma ka fikertey madaxwayne noocee ah ayaad dooran lahayd?
Aqristow sida caadada tahay, su’aalahaas jawaabtooda adiga ayaan u daayey, ee bal ila soo socodsii meeshii aad tiraahdo xalkeeda waa laga heli karaa.
Waxaa kuu soo diyaariyey: Mohamed Barre – Junlay “Buluf” oo wax ka qora arimaha Soomaaliya, ahna qoraa madaxbanaan, degana magaalada Minneapolis, MN – junlay99@aol.com
Kismaayodaily On May - 23 - 2014